Kupa Chain Ongororo - Pandawill Technology Co, Ltd
Supply Chain Ongororo
Pakati pezvigadzirwa zvatinogadzira, zvinosvika makumi masere kubva muzana emutengo wechigadzirwa zvinogona kugadzirwa neBOM (Bhiri Rezvinhu). Isu tinoronga rese rese rekutenga zvinoenderana nevatengi vedu 'zvine simba zvinodiwa uye marongero, tichifunga zvinhu zvakadai seanodiwa degree rekuchinjika uye kuverenga kwehuwandu. Pandawill inoshandisa rakazvitsaurira, zvikamu zvekutsvaga uye rekutenga timu kuti igadzirise mashandisiro uye kutenga kwezvinhu zvinoshandisa mhando-inodzorwa uye nguva yakaedzwa sisitimu sisitimu iyo inovimbisa isina mhosva zvemagetsi zvikamu zvekutsvaga.
Kana ukagamuchira iyo BOM kubva kumutengi wedu, kutanga mainjiniya edu ane ruzivo anoongorora iyo BOM:
>Kana iyo BOM yakajeka zvakakwana kuti iwane chitauro (chikamu nhamba, tsananguro, kukosha, kushivirira nezvimwe)
>Govera mazano zvinoenderana nekugadzirisa kwemitengo, nguva yekutungamira.
Isu tinotsvaga kuvaka kwenguva refu, kudyidzana kudyidzana nevatapi vedu vanobvumidzwa pasi rese zvichitigonesa kuramba tichideredza mutengo wese wekutenga nekutengesa kuomarara nepo tichiri kungoita akakwirisa ehunhu uye kuendesa.
Yakasimba uye yakazara yevatengesi hwehukama manejimendi manejimendi (SRM) chirongwa uye ERP masisitimu akashandiswa kuteedzera nzira yekutsvaga. Pamusoro pekusarudzika kwevatengesi uye kuongorora, kwave nekudyara kwakakura muvanhu, zvishandiso uye kuvandudza maitiro kuita chokwadi chemhando. Tine yakasimba inopinda yekuongorora, kusanganisira X-ray, maikorosikopu, magetsi ekuenzanisa.